I-Acer Predator X27, ukubeka esweni ukuba wonke umntu ophuphayo aphupha [Uhlalutyo] | Iindaba zeGajethi
I-Acer Predator X27, ukubeka esweni ukuba wonke umntu ophuphayo aphupha [Uhlalutyo]
Kwakhona siza kukuzisa uhlalutyo onokuthi ukhethe ngalo malunga nemveliso yeelektroniki zabathengi. Icandelo le-smart home kunye ne-IT lukhethekileyo kuthi, yiyo loo nto singekhe siphoswe kukuqeshwa kwethu kwesiqhelo kunye neemonitha zazo zonke iintlobo ngeli xesha siza kugxila kwi «yokudlala».
Hlala nathi ukufumanisa Yonke into ekufuneka uyazi malunga ne-Acer Predator X27 yamva nje, esweni esiphakamileyo i-4K esweni kwabona badlali bafuna kakhulu, ngaba iya kuba yinto efanelekileyo? Uya kuyazi ukuba zithini na iinkcukacha zayo kwaye ukuba kufanelekile ukuba uthenge.
Njengamaxesha onke Siza kujonga ezona zinto zibalaseleyo, kodwa siya kuthi siqwalasele yonke into, ukusuka awona macandelo akhethekileyo kwinqanaba loyilo, ukuya kumava adlalwa koku kubek 'esweni. Sicebisa ukuba uhambe ngeAmazon (unxibelelwano) ukuba ufuna ukuyithenga, njengesiqhelo, ngezona ziqinisekiso zibalaseleyo.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Yonke into yipremiyamu
2 Ukubalula kwezobuchwephesha: Eyona nto inzima kakhulu
3 Elona zinga liphezulu lokuhlaziya, kunye neenkcukacha
4 Uluvo lomhleli: Eli liliso lidlala enye iligi
Uyilo kunye nezixhobo: Yonke into yipremiyamu
Sisuphavayiza esiphakamileyo kwaye ke ngamaxabiso aphezulu "aphezulu". Ingenza njani into yokuba ithathele ingqalelo le nto ibaluleke kangaka, sifumana ezinye izinto zokuvelisa ezizele ngokupheleleyo kunikezelo lwentlawulo. Ukuqala, sifumene ukupakisha okukhulu, isimanga xa sibona ibhokisi enkulu apho oku kubekwa esweni khona sele kumangalisa. Njengoko sivula ukupakishwa saqonda ukuba akukho nkcukacha inye ilahlekileyo.
Yakhelwe ngentsimbi kwimeko yesiseko kunye nengalo, kunye neplastiki njengesiqhelo kwindlu yokubek 'esweni, into enengqondo yayo yonke. Siyabala kunye nobunzima obuhlanganisiweyo be-12,3 Kg kunye nemilinganiselo ye-62,9 x 37,4 x 57,5 cm ayikho enye into kwaye akukho nto ingaphantsi kwebhokisi yayo. Imibala emnyama kunye nee-angles ezinobundlongondlongo zisikhokelela ekubeni siqonde kwangoko ukuba sijongana nemveliso ezinikezelwe kubadlala kakhulu kwindlu nganye. Isiseko sinemilenze emibini ebhityileyo, emide engayi kude kakhulu etafileni, umva ubonakalisa uphawu lwentengiso ngombala oqaqambileyo. Ngasemva kwicala lasekunene sinayo induku yokudlala yokujikeleza ujongano lomsebenzisi, esebenza njengeqhosha kwaye kubomvu, kunye noluhlu lwamaqhosha kwinjongo enye. Phezulu nasezantsi sinayo imingxunya ukuqinisekisa ukusebenza kwesixhobo.
Isiseko siziva somelele kwaye sigcina isixhobo sibambelele etafileni, nangona kunjalo Intaba yeVESA iyahambelana ukuba sifuna ukuyixhoma ngqo eludongeni. Imasti eguquguqukayo iya kusivumela Yijike phakathi -5 kunye nama-25 degrees, kwaye uyijikeleze phakathi -20 kunye +20 degrees, Kodwa ewe, asizukukwazi ukuyitshintsha siyibeke kwimowudi ethe nkqo, nangona kungenangqondo kwaphela ukuba sithathela ingqalelo ukuba eyona njongo yayo lilizwe lemidlalo yevidiyo, kude namacandelo emveliso. Okokugqibela sinothotho lwezibane ze-LED-RGB emazantsi eziza kuthi zinike itafile yethu imeko emnandi ngakumbi, Ezi zibane ziyaqwalaselwa ngesandla, kodwa azilandeli naluphi na uhlobo lweepateni ngaphaya kwale sizinike zona ngokujongana nomsebenzisi. Gxininisa ukuba inoluhlu lwee-velvety visors kwi-interoir
Ukubalula kwezobuchwephesha: Eyona nto inzima kakhulu
Ukujonga esweni iAcer Predator X27
Uhlobo lwepaneli IPS 27 "-AHVA-178º yokujonga kunye ne-HDR10
contrast 1.000: 1
Akhanye I-600 ukuya kwi-1.000 nits nge-384-zone-LED light (FALD)
RGB I-75% kunye ne-96% ngokwahlukeneyo kunye ne-sRGB
Ukuhlaziya kunye nexesha lokuphendula Ukuya kwi-144 Hz kunye ne-4ms
Isigqibo 3.840 x 2.160 (163 DPI)
Iikitikiti Umboniso wePort 1.4 - HDMI 2.0 - 4x USB 3.0
Izithethi kunye nabenzi boluvo 2x4W istereo-Inzululwazi yokuqaqamba
Ixabiso Ukusuka kwi-1999.99 euro
Zombini iimpawu kunye nexabiso ziya kukushiya ungathethi, oko kuyacaca kum. Sigqamisa ukuhambelana I-HDR10 yokujoyina i-NVIDIA G-SYNC Ukwanelisa iminqweno yabona badlali bafuna kakhulu, kwaye awuyi kuba nakho ukucofa eFortnite, sinokucaca njalo. Ukuhlaziya okwahlukileyo okuya kufinya uninzi lwesixhobo esingaswele nto. Nangona kunjalo, ndimele nditsho Mna ngokwam ndiphose uqhagamshelo lwe-HDMI ngakumbiIngathi bebekhe bacinga ngokudlala kodwa… Kuthekani ukuba, njengam, kuvela ukuba udlala kwindawo enye nalapho usebenza khona? Banokuyenza ibe sisixhobo esisebenza ngakumbi.
Elona zinga liphezulu lokuhlaziya, kunye neenkcukacha
Kuya kufuneka sifumane inqanaba lokuhlaziya elincomekayo elibonelelwa yile esweni kwaye bambalwa abalifumanisayo kwimarike. Nangona kunjalo, kufuneka silihoye i-HDMI port ukuba eyona nto siyifunayo kukudlala ngokupheleleyo, ukusukela oko le HDMI 2.0 iyakusinyanzela ukuba sisebenze phantsi kwamaxabiso ama-60 Hz kwizisombululo ezingama-4K, Ukuba into esiyifunayo kukudlala ngokungxamisekileyo, kufuneka sisebenzise i-DisplayPort 1.4 port eza kusivumela ukuba sifikelele kwiimpawu G-SYNC kunye ne-HDR10, Ngokwendalo isinika i-98 Hz kunye ne-4: 4: 4 isampampling, indlela yokudlala ngaphandle kokuphulukana nayo nayiphi na ingcaciso kuba inganyanzelwanga apha endleleni. U-LInto iyatshintsha ukuba sifuna ngaphezulu, ukusebenzisa amaxabiso ahlaziyayo ayi-120 Hz kunye ne-144 Hz kufuneka sibhenele kuxinzelelo olungasithobisi kwi-4: 2: 2Nangona kunjalo, ndimele nditsho ukuba amehlo am awandivumeli ukuba ndifumane umahluko phakathi kobukhali kunye nomgangatho womfanekiso oboniswe ngeesampulu ezahlukeneyo, kodwa ndikwazile ukonwabela ukudlala kwi-144 Hz.
Ngokuzenzekelayo asizukukwazi ukuya ngaphezulu kwe-120 Hz, ngenxa yoku siya kusebenzisa ujongano lomsebenzisi wokubek 'esweni (ngokurhabaxa kwimbono yam ukuba amaqhosha awakhunjulwa kakuhle) sebenzisa ngaphezulu kwe-overulsing kwaye uye kwi-144 Hz. Ibango likhulu kwaye Okwangoku, kuqhelekile kuthi ukuva abalandeli bebaleka esweni, eli lixabiso lokuhlawulela lona. Nje ukuba kwenziwe oku siya kuba nakho ukufikelela kukhetho oluhambelanayo lwe-NVIDIA kunye nakwiPaneli yokuLawula leyo Windows 10 isinika.
Uluvo lomhleli: Eli liliso lidlala enye iligi
Oku kubekwa esweni akulungiselelwe ukuba abo bathanda ukuthatha ii-Fortnites amaxesha ngamaxesha (nazo), oku kubekwa esweni Yenzelwe abo benza umdlalo ukuba ube ngumnqweno wabo, kwaye ngaphezulu kwabo bonke abakulungeleyo ukuchitha phantse i-euro ezingama-2.000 ezixabisa yona. Asiyi kuthi ayifanele utyalo-mali, kodwa ukuba le yimveliso ebonakalayo ngokucacileyo. Sinazo zonke izinto ezinokubuzwa esweni esingaphezulu kwescreen apho ungadlala khona okanye ubukele uthotho, ukusebenzisa isifaniso semoto ndingathi sijongane neFerrari yabagadi, kuphela ukuba unayo amandla onokonwabela yonke into ekunikwa ngamava abo. Ungayithenga kwiAmazon ukusuka kwi- € 1.999,99 Ukuthatha ithuba kwezona zinto zibalaseleyo. Ewe ayisiyonto yentengiso ngobuninzi, okanye eyilelwe nabani na, ngaba ukulungele ukuhlawula oko kufanelekileyo?
Ndikhumbula enye i-HDMI
Ujongano lomsebenzisi alunamsebenzi
Izithethi zezona ndawo zibuthathaka
Izinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni kunye nokupakishwa okugqwesileyo
Ezona zinto zibalulekileyo kwintengiso
Kwakungenakwenzeka ukuba ndifumane kodwa kwiphaneli ye-IPS
Iza sele ikulungele ukusetyenziswa
Ukujonga kwakhona: I-Acer Predator X27
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Acer Predator X27, ukubeka esweni ukuba wonke umntu ophuphayo aphupha [Uhlalutyo]
I-Thermomix TM6, uyolo lokupheka ngomatshini okrelekrele odibanisa unxibelelwano lweWiFi